Permalink Reply by kohtuusann on December 13, 2012 at 21:05
Awaiting your clarification, PLEASE!!!
Permalink Reply by May Myat Noe Aeim on July 18, 2013 at 16:42
Permalink Reply by kohtuusann on January 17, 2013 at 14:12
အဲဒီတာဝန်ခံကိုထပ်မေးချင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ဖို့ မေးလ် ပေးပါဦး။
Permalink Reply by Htoo Aung Kyaw on January 21, 2013 at 15:12
အပိုင်းတွေနဲ့တင်ထားတဲ့ post တွေမှာ အရင်ကတင် ပြီးတဲ့ အပိုင်းတွေရဲ့ link လေးတွေပါရင် အခုမှစပြီးလေ့လာမဲ့ သူတွေအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေမယ်ထင်ပါတယ်
Permalink Reply by Diamond on July 2, 2013 at 6:30
Permalink Reply by maylay on July 15, 2013 at 16:18
Permalink Reply by Shwethanthida on July 18, 2013 at 10:23
သတိမထားမိဘဲ လွဲမှားအသုံးပြုမိတတ်တာလေးတွေဖြစ်လို့ အခုလိုသေချာ ရှင်းလင်းပြပေးတာ အလွန်ကောင်းးပါတယ်။
Permalink Reply by Julia Hanaro on July 18, 2013 at 11:31
"၄၀။ Revert back - နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်
စောစောပိုင်းအနေအထားအတိုင်း ပြန်ဖြစ်တာကို Revert လို့ သုံးပါတယ်။ back မလိုအပ်ဘူး။"
I thought there'sausage, "Can you revert back to me?".